Ukulanda zemali, Numismatics, noma - ifomu ethandwa kakhulu wokuqoqa. Abanye abantu bacabanga ukuthi akulungile ucingo uhlamvu lwemali lokuqoqa Numismatics, njengoba izwi izibalo zikhomba isayensi umsuka nomlando zemali. Nokho, ngokuyisisekelo inqubo ayiguquki.
Zintathu izindawo eziyinhloko uhlamvu ukubuthwa: icala (ngiphakamisa zemali ngemifanekiso ezithile), lokuqoqa zenkolo kanye zemali esiyisikhumbuzo, pogodovka (uhlamvu lwemali ezweni elithile ngonyaka kanye Mint, okungukuthi, okuyizimpawu ezithile uhlamvu lwemali izinkantolo Russian noma ezinye nesimo).
Kuyaphawuleka ukuthi lokuqoqa zemali - wokuzilibazisa eqolo. izinto Vintage kungaba abulala amakhulu ezinkulungwane noma ngisho ezigidi zamarandi namuhla. Akuwona wonke umuntu abakwaziyo ukuthenga ucezu metal ngoba esilinganayo. zemali Ekhumbulekayo Nemisebenzi esiyisikhumbuzo futhi zinenzuzo abalulekile, kusukela ezikhathini eziningi ezenziwe of amatshe ayigugu noma akhiqizwa eziningi limited. Yingakho phakathi imfundamakhwela uhlamvu lwemali abaqoqi ethandwa kakhulu lapho uya khona eziqoqekayo is ukukha pogodovok USSR neRussia. Kodwa hhayi konke ngakho elula! Ngisho zemali wombuso owodwa, par, ngonyaka ukwakhiwa kanye isimo esifanayo angase abe i-value ehlukile emakethe.
Kungani kwakhishwa izinhlamvu zemali ngaphezulu?
Ngokwesibonelo, e-Russian Federation namuhla usebenza mints ezimbili - eMoscow Petersburg. Zombili lezi zinkampani kwelinye futhi ngesikhathi esifanayo esikhishwe izinhlamvu zemali zabashintshi naminala efanayo. Nokho, omunye mints kungenzeka ukukhulula edition elinganiselwe. Kwakuthinta uhlamvu kubalwa kwegazi ezincane, kuyodingeka value ephakeme. uchungechunge Limited zingachazwa ngezinqubo iqiniso lokuthi Mint azange abe nesikhathi nokufuna, futhi ingxenye oda idluliselwe wesibili. Thola umenzi usizo isitembu mints Russian.
Mint dvor- ebhizinisini likahulumeni wahlanganyela womshini imali yamaphepha, ama-oda, izindondo, amapuleti esiyisikhumbuzo, ayenza lezi zinhlamvu.
Inhlamba - uphawu, esiwuphawu inkampani, okwakwenza (kubalwa) zemali. Njengoba mintmark kungaba izincwadi, monogram, imifanekiso, izithombe, nokunye.
Njengoba kushiwo ngaphambili, lapho Mint - eMoscow Petersburg - kubalwa uhlamvu lwemali, incike inani lemakethe.
Uhlamvu lwemali lokuqala yasekhaya, okuyinto has a mintmark, - Ruble ngo-1975, elalinikezelwe yokugubha usuku wamashumi amathathu Ukunqoba e ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe. Monogram (isitembu) Mint kubalwa ezansi kwesokudla yesithombe lesikhumbuzo. Kamuva ithusi-nickel zemali esiyisikhumbuzo zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa mintmark ayiqhutshelwa. Ngaphezu yasekhaya uhlamvu isitembu Russian Mint (SPMD - Petersburg Mint) imi zemali encane Tajikistan.
Lapho zemali ezibekwe inhlamba mints Russian?
Ngo-1991, izitembu mints babe izinhlamvu "M" futhi "L" - I-Moscow naseLeningrad Mint. zemali baseSoviet abaphenya brand kuya kwesokudla elingenamikhono izingalo. Ukwehluka - 5 no-10 kopecks. 1990
Lezi zinhlamvu ezahlukene naminala ayenza lezi ka 1991-1992 (udaba okuthiwa leKomiti eziphuthumayo), kukhona izimpawu ezihlukahlukene mints Russian. Le ncwadi "M" - 10 amasenti, uhlamvu "A" - amasenti 50, futhi Monograms LMD MMD - 1 Rouble. On zemali esinikeziwe kuyizimpawu mints engaphansi ekubizweni ihlelo.
Kuzo zonke zemali yesimanje ejikelezayo, kushiwo Russian uhlamvu lwemali amayadi angu (ubheke - M, MMD, C-II, SPMD). On the zemali encane (1-50 amasenti) ngaphansi inselo ehhashini angase abekwe C-P noma M. I "M" umi phezu zemali kubalwa i-Moscow Mint, "C-P" - Saint-Petersburg.
Lesi simiso waphawula kanye ihlelo zemali 1, 2, 5 no-10 ruble. Uma ubuka eduze, lwemali kwesokunxele ngaphansi isidladla ukhozi kungabonwa monogram MMD noma SPMD (eMoscow noma Petersburg Mint, ngokulandelana). Nokho, ngisho lapha kunomehluko - ku zemali kweminti neruwe, futhi omunye unyaka ayenza lezi isitembu has a ezahlukene indawo isihlobo ukuba imilenze okhozi. Inani emakethe imikhiqizo offset ethe xaxa.
Kungani kwakhishwa izinhlamvu zemali angekho uphawu?
Futhi kufanele kuphawulwe ukuthi inhlamba Russia mints esasikuwo hhayi kungaba. Ngokuvamile kuba ukungabi kunomonakalo yokukhiqiza - noma monogram lettering nje selikhohliwe ukubeka yokukhiqiza isitembu sesikhathi. Kuze kube manje, siyazi zemali ezine unbranded - 1 ruble 1993 (siyigubhe weminyaka engu 130th yokuzalwa Vernadsky), 5 amasenti ngo-2002 no-2003, 2 ruble 2001 nge Yuri Gagarin isithombe (engu-40 ubudala ngendiza yokuqala bavimba imigwaqo. emkhathini). Lezi zinhlamvu abasakwazi ezingavamile, futhi ngenxa yalokho zinenani esikhethekile abaqoqi.
Ngokuqondene zemali Soviet ke cishe bonke of them akukho inhlamba. Thola Mint kungenziwa ihlaziye ngokuningiliziwe uhlamvu uqobo. Ezinye izici umdwebo kufa zikuvumela ukuchaza indawo minting. Umehluko osobala kakhulu ku lettering lwemali.
Umlando eMoscow Mint (M esinegama, MMD)
Ngo ayenza lezi eMoscow Nokho, kwenziwa phakathi namakhulu eminyaka amaningana, usuku esemthethweni isisekelo kubhekwa ibhizinisi lesimanje 25.04.1942 Ngo-1995, i-Mint baba ingxenye State Association "Goznak". Ngokwe-oda uhulumeni ukukhiqizwa oda, izindondo zemali ithwala YaseMoscow Mint. EMoscow futhi wenza ayenza lezi oda angaphandle futhi ukhiqiza izindondo amabheji oda yangasese. Ngaphezu kwalokho, Mint ukhiqiza zemali esiyisikhumbuzo ne zemali utshalomali eyenziwe amatshe ayigugu.
Umlando Petersburg Mint (ngehlazo A, C, P, SPMD)
Umuzi, okuyinto iyisonto omdala yokusebenza Mint eRussia Petersburg. Mint yasungulwa ngo-1724, Peter I. Njengoba base wakhethwa futhi Paul Fortress. Le nkampani ingenye mints esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Futhi, isakhiwo - eliyingqayizivele lesikhumbuzo bokwakha futhi amabhizinisi endala yezimboni edolobheni. Mint waziphatha yokukhiqiza of amabheji, izindondo, izindondo, nezinto zenkolo ukwakhiwa zemali esiyisikhumbuzo, kuhlanganise zemali kwenziwa of amatshe ayigugu.
Kungani awufomethiwe idrayivu kanzima? Indlela ukufometha a disc?
Iphinde itshalwe imibungu nge IVF: kanjani kwenzekani?